कोइरालाको कठिन परीक्षा
अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनको विफलताबाट दलहरूले पक्कै केही सिकेका होलान् भन्ने जनताको अनुमान फेल खाएको छ। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि दलहरूको बीचमा जुन ढंगको बहस प्रारम्भ भएको छ, यसबाट जनता उत्साही होइन,...
गृहनगरमा मिस नेपालको सम्मान
ढाकाको सारी–चोलो, ढाकाकै दोसल्ला, शिरमा शिरबन्दी, गलामा कण्ठ। लिम्बू महिलाको परम्परागत पहिरनमा सजिएर मंगलवार आफ्नो जातीय संस्था किरात याक्थुङ चुम्लुङ हिम पुगेकी मिस नेपाल सुविन लुङ्फुङ्वा लिम्बूलाई आयोजकले 'सिलाम साक्मा'...
जे छ, ग्ल्यामर क्षेत्रमै छ
बेलुका फिट्नेस सेन्टरमा। दिउँसो मोडलिङ ओरिएन्टेसन कार्यक्रममा। अर्को दिन मेकअप क्लासमा। धरानकी मन्दिरा लामिछाने सक्रिय छिन्।
'डाक्टर पढ्न फिलिपिन्समा सस्तो छ'
आइतबार २४ फागुन, २०७१
नेपालमा मेडिकल कलेज खोल्ने स्पर्धा चर्को बन्दै गए पनि एमबीबीएस पढ्न विदेशिने विद्यार्थीको संख्या भने घट्न सकेको छैन। देशमा अहिले डेढ दर्जन मेडिकल कलेज सञ्चालनमा छन्। तर, एमबीबीएस पढ्न विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या भने बर्सेनि दोब्बरका दरले बढ्दै छ।
१६ फागुन, २०७१
यौनका मामिलामा नेपाली समाजलाई खुल्ला र उदार भन्न नसकिए पनि बन्द र अनुदार भन्न सकिने अवस्था अब रहेन। प्रविधिको उपलब्धता र सर्वसुलभताले यौनजन्य आनन्दका थुप्रै विकल्प उपस्थित छन्। तीमध्ये एक हो- ब्लू फिल्म। मोबाइल तथा कम्प्युटर मर्मत केन्द्रका प्राविधिकहरूका कुरा…
पोर्नको भव्य खेतीपाती
विश्वका ४५ करोड मानिस 'पोर्नोग्राफी'को नशामा फसेको तथ्यांकले देखाएको छ। जिक्यू डटकमका अनुसार प्रत्येक पाँच जनामा एक जनाले दैनिक पोर्न फिल्म हेर्ने गर्छन्। त्यस्तै ५९ प्रतिशतले हप्तामा पाँचदेखि १५ घण्टासम्म पोर्न फिल्म हेर्छन्। पोर्न मुभीको लतमा फसेका ५० प्रतिशतले भने…
म त पूर्ण प्याकेज रे! : मञ्जु पौडेल
मञ्जु पौडेल स्टेज कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चर्चित छिन्। विशेषगरी उपत्यकाबाहिर हुने मेला–महोत्सवका कार्यक्रममा उनको व्यस्तता रहने गरेको छ। नेपालबाहिर अस्ट्रेलिया, हङकङलगायत दर्जन जति देशमा पुगेर पनि उनले उद्घोषण कला देखाइसकेकी छिन्। यसैगरी २०६२ सालदेखि नै उनी तीजे गायिकाका रूपमा पनि…
स्पेनको शीर्ष लिग फुटबल टुर्नामेन्ट ला लिगा को हिंसाविरोधी समितिले लेवान्टे र बार्सिलोनाविरुद्ध छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ। रियल म्याड्रिडका स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई कथित रूपले अपमानित गर्ने उद्देश्यले बनेको एक गीतका कारण यो निर्णय गरिएको हो। समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाका…
को जाओस् पार्टी कार्यालय?
एक वर्षअघि सरकारको नेतृत्व लिएको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा पार्टीका नेता भेटिँदैनन्। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति सुशील कोइराला सार्वजनिक कार्यक्रमबाहेक गत साउनदेखि कार्यालय पुगेका छैनन्।
यत्तिकै बितेको एक वर्ष
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अघिल्लो साता सरकारले एक वर्षको अवधिमा गरेका करिब डेढ सय उपलब्धिको लामो सूचि सार्वजनिक गरेका थिए। सरकारले हासिल गरेका भनिएका उपलब्धि जनताले पढिनसक्दै उनै प्रधानमन्त्री कोइरालाले आमजनताको चाहना र आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताको भावनाअनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार…
जायजेथा बाँदरका नाममा
छोराछोरीले दुःख नपाऊन् भनेर मान्छेले उनीहरूका नाममा सम्पत्ति राखिदिने गर्छ। कसैले करोडौँको सम्पत्ति बाँदरको नाममा गरिदिन्छ भन्ने सुन्दा पत्याउन गाह्रो पर्छ। तर, यो दुनियाँ हो, जो विचित्र छ र यहाँ जे पनि हुन्छ।